Cayaartoyda Qaranka oo cabasho ka dhan ah Xiriirka u qoray FIFA – Garsoore Sports
Cayaartoyda Qaranka oo…
Qaar ka tirsan cayaaroyda xulka qarankeenna Soomaaliya ayaa warqad dheer oo cabasho, garnaqsi iyo sixitaan cadaalad raadin ah u diray xiriirka dunida ee kubbadda cagta FIFA.
Warqadda oo Af-Ingiriis ku qorneyd ayaan iyadoo tarjuman halkan idinkugu soo gudbineynaa, waxayna u qornayd sidan:
“Warqadi ciyaartooyda xulka qaranka ee faafiyen manta oo af somali ah:Marka hore waxaan jeclaan laheen inaan u mahadcelino dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida ee taageerada u muujiyay xulka Qaranka Soomaaliya. Taageeradaadu waxay ahayd mid cajiib ah.
Ka mid noqoshada iyo matalaadda ummaddeena aan jecel nahay waa sharaf weyn.Kadib tobanaan sano oo colaado ah wadankeena Soomaaliya wuxuu wali kujiraa dowlad dhisida nabada. Maaddaama aan nahay xulka qaranka Soomaaliya ujeedkeenna ugu weyn waa in aan dhisno buundooyin iyada oo loo maraayo isboortiga isla markaana aan qeyb ka qaadano dhismaha Soomaaliya oo xasilloon, nabdoon oo midaysan.
kubbadda cagta Somalia aad aya loga jecelyahy Cayaartani waa mid loogu talagalay qof walba waxayna ka qayb qaadataa dib u heshiisiinta, is dhexgalka iyo midaynta markii si sax ah loo isticmaalo.Laakiin nasiib daro ilaa maanta lama siinin fursad cadaalad ah oo aan ku gaarno ujeedkeeda.
Xulashada ciyaartoyda: Inta badan dadkeenu waa dhalinyaro. Dhalinyaro hamiweyn ka leh kubada cagta. Dhallinyaradan dhammaantood waxay mudan yihiin in lees ku keeno oo lagu faano isla markaana ay ku raaxeystaan ​​kubbadda cagta.Horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya waxaa ka buuxa xirfadleey badan. Marka lagu daro kartida ciyaartooyda dibada, waxaa heysana jiil aad u xoogan. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in la xusho xul qaran oo Soomaaliyeed oo tartami kara una qalma tartamo waa weyn. Tan ayaa farxad weyn u keeni lahayd dadkeena.
Dhamaan ciyaartoyda kubada cagta ee wadata dhalashada Soomaaliya waxay mudanyihiin fursad cadaalad ah oo ay ku matali karaan dalkooda, xulashada waa in lagu saleeyaa kartida iyo xirdafa laacibka iyo maaliyada oo matali doono oo ah xulka qaranka, Si Soomaaliya uga qeyb gasho tartamada ayada oo awoodeeda u dhameystiran tahy, taas ayana ah midda eey ku jirto danta dalkeena.
Saciid Haibeh waa maamulaha xulka qaranka Intaa waxaa dheer inuu yahay (wakiilka ciyaartooyda) taas aya ka dhigeysa ino dano shakhsiyaded ka leeyahy ciyaartoydeena. Tani waxay ka soo horjeedaa dhammaan sharciyada iyo xeerarka.Nasiib darro se waxaa jiray dhowr hab oo aan caddaalad ahayn oo lo maray xulista xulka qaranka Soomaaliya. Halka ay dano kale oo badan ku lug lahaayeen xulista xulkeena qaranka. 12 ciyaartoy oo maxalli ah oo ka ciyaara horiyaalka Soomaaliya aya ka mid aha ciyaartooydi leesku keenay, inta anan ayaga la keenin ka hor ayana la gudbiyay liiska ka qeyb gali laha ciyaarta taas oo ka dhigan in leeska keenay, oo aneyn liiski ladirayeba ku jirin.
Ciyaartoydeena maxalliga ah waxay aaminsanaayeen fursad xaq ah, laakiin mahelin, mana aysan awoodin inay hadlaan iyagoo ka baqaya inay saameyn ku yeelato. Tani waxay nusqaan weyn ku tahay ciyaartoyda qarankeena iyo awooda qarankeena laftiisa.Haddaan nahay ergada xulka qaranka Soomaaliya mar dambe aqbali mayno cadaalad daradaan.
Warbaahinta Soomaaliyeed: Warbaahinta kala duwan ee Isboortiga ayaa gudbiya macluumaad marin habaabin ku ah dadkeena iyagoo ka baqaya inay waayaan adeegyadooda iyo faa’iidooyinkooda. In kasta oo waajibaadkoodu yahay inay u adeegaan oo u soo gudbiyaan dadweynaheena war huban. U adeegida dadkeena oo ku saleysan cabsi iyo eex waxay keenaysaa dib u dhac saameyn ku ah danteenna guud si aan u horumarinno dalkeenna. Waxaan ka codsaneynaa warbaahinta Soomaaliyeed inay gutaan waajibaadka ka saaran shacabka Soomaaliyeed ayna faafiyaan sawir daacadnimo iyo ujeedo leh.FIFADaahfurnaan iyo isla xisaabtan furan waa waajib saaran Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed. Haddii aan la helin howlahan muhiimka ah kubbadda cagta ma gaari doonto muuqaalkeeda suuragalka ah. Madaxweynaha Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta Cabdiqani Saciid Carab wuxuu noo balan qaaday inuu na siin doono qorshe aan ku horumarinayno xulalka. Ujeeddada ugu weyn ee qorshaha ayaa ahayd in xulalkeennu tartamaan. (Senior, U20 and U17) Halka xulka waaweyn ee qarank ay ciyaari doonaan dhamaan fasaxyada caalamiga ah ee FIFA ( FIFA Window ) si kor loogu qaado booska Soomaaliya ee qiimeynta adduunka.
Intaas waxaa sii dheer in madaxweynaha uu yiri kadibna uu si cad shaaca uga qaaday in SFF ay shaqaaleysiin doonto macalimin iswata oo dhameystiran oo ay kujiraan qorshe gaaban iyo mid fog ee xulka qaranka arimahas oo dhan ayanan la fulin.SFF ma aysan qaadin wax talaabo ah oo lagu fududeynayo safaraadka ciyaartooyda intii lagu jiray aafadan carona. 8 Cayaartoy oo dibada ka timid ayaa lagu qabtay Garoomada Transit-ka sababo la xiriira fiiso la’aanta, halka Mid kale uusan haysan fiiso sax ah mana safri karin gabi ahaan. Lama raacin wax hab raac ah . Ma aanan haysan wax qiimeyn iyo howlo kormeer caafimaad ah intii aan ku jirnay xerada tababarka ee Jabuuti. Ma anan heysan ( antibac, facemask, baaritaanno carona iyo ciyaartooyda oo la xeendhaabo sida sharciyada fifa eey qabto) maanaan haysan shaqaale caafimaad gebi ahaan. Tani waxay si cad u jebineysaa borotokoolka FIFA ee lamagac baxay “Ku Noqoshada Kubadda Cagta” waxayna khatar gelineysaa caafimaadka ciyaartoyda iyo bulshada.Maaddaama ay muhiim tahay in horay loo socdo lana dhiso kalsooni dhinacyada oo dhan waxaan ka codsaneynaa FIFA inay fiiriso oo ay falanqeyso xaaladda. Hadaanu nahay ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya waxaan FIFA ka codsaneynaa daah furnaan iyo isla xisaabtan dheeri ah.
Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed: Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa dayacay awooda kubada cagta. Tan iyo safarkeeni xulka qaranka ma jirin qorshe istiraatiijiyadeed oo hormarineed, halka FIFA ay wali siineyso xubin kasta oo xubin ka ah taageero dhaqaale. Borotokoolka FIFA ee lamagac baxay “Ku noqoshada kubada cagta” carona kadib. Brotokoolkaas. wuxuu si cad u qeexaya sida loo shaqeeyo inta lagu jiro aafadan. Intaas waxaa sii dheer FIFA waxay siisaa urur kasta oo xubin ka ah $ 1.000.000 USD. Intaas oo taageero ah kadib SFF wey awoodi Kari wayeen iney qaatan masuuliyadooda iyo waajibaadkooda.ka hor ciyaartii is reeb reebka FIFA Arab cup 2021 ee an la ciyarnay Cumaan ayaa la filaayay dhamaan ciyaartooyda in eey so gaaraan Jabuuti si ay ugu qaataan xero tababar. Waxa la kulanay wax ka duwan hadalki gudomiye cabdiqani. Waxaan helnay hal macalin oo aan karti laheyn waxan helnay tababar liita. Waxyar kadib markii shaqada laga cayriyay tababaraha. Wax walbe oo dhacay kadib, ciyaartoyda waxay ahaayeen xirfadlayaal waxeyna ilaliyeen una halgameen dalkooda. Waxa so baxday tayadooda aadka u sareysa, halka Ssf ee kalintooda qaadan wayeen. Tan waa waayoaragnimadena ugu danbeysay oo ka mid ah waayoaragnimo tiro badan oo an ka helnay safaraadkena adag ee xulka qaranka.Tobannaankii sano ee la soo dhaafay Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed wuxuu muujiyey in kubada cagta maxaliga iyo tan caalamiga ahba uusan si togan u matalin.
Ilaa bishii hore, 17 bilood ayaan aheyn macalin la’an. Tababareyaal iyo ciyaaro la’an. SFF caadiyan waxay xulka qaranka u magacaabaan hal macalin oo mudo koban jogaya ka hor koob laga qeyb galayo ama hal kulan oo isrebreb ah. tartamo laga qeyb galayo oo anan leysku diyaarineynin waxey adkeynesa inan guul ka gaarno kulamadas. Marki eey so gabagabowan tartamadi nucaas loga qeyb galay waxa sida caadiga ah bilowda marxalad anan jirin wax dhaqdhaqaaq laxirira xulalka qaranka. Hadi aan u gudubno AFCON 2021 ee soo socda SFF waxay go’aansadeen inaysan xulka qaranka diiwaangelin. Arintan aya ah mid anan la aqbali karin laakiin wa qalad kale oo weyn oo ey ku dhaqaqeen SFF. Jiilkani waa kii ugu fiicnaa ee soo mara xulkeena. Nasiib darro laakiin waa run, ciyaartoydan aya ayagana ah kuwo sidoo kale dhibanayaal ah. Ciyaartooyda xulka qaranka waxa lagu dhaliila hab ciyareedkooda iyo natijooyinka, lakin dadka aadka ula socda iyo ka qeybgalayaasha way ogyihin in xiriirka dhankiisa ay cilada tahay.
Maanta laga bilawana waxan si daahfuran bulshada iyo taageraysha ula wadaagi doona wax walba. Tiro ciyaartoy aya gudoomiyaha la hadlay dhow jeer si loo bedelo qaabka eey wax ku socdan lakin wada hadaladaas wax natiijo ah kama so bixin. Tani waxay naga dhigeysaa ciyaartoy aan niyadooda degeneyn marka aan mataleyno wadankeena oo aan shaki weyn ka qabno daacadnimada SFF.Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed waxaa ka muuqatay karti la’aan dhowr meelood oo muhiim ah.Ciyaartooyda waxey kalsoonida kala laabten Ssf waxayna rajeynaayan caawimaadda iyo taageerada FIFA, CAF, SOC, naadiyada xubnaha ka ah SFF iyo wasaarada dhalinyarada iyo isboortiga in tani aysan mar dambe dhici doonin. Mustaqbalka dhowna waxaan rajeynaynaa inaan aragno dad ku haboon oo karti leh oo maamula Xiriirka Kubadda Cagta ee dalkeenna aan jecel nahay ee Soomaaliya.
Waxa la jooga waqtigi isbedel u dhici laha kubada darteed.
Wafdigii Xulka Qaranka Soomaaliya ee Cumaan: